Bogga ugu weyn / blog / Musqulahaan sidoo kale waa kuwo aad u qiimo badan, Dhammaantood ma aragtay?
2021 / 04 / 21 Qoondayntablog 1688 0
Musqusha waa meel aan si joogto ah u taabano maalin kasta, nadaafaddiisa, keydkeeda iyo abaabulkeeda, iyo abuuritaanka jawi dhammaantood waxay xiriir dhow la leeyihiin dhadhanka milkiilaha. Ka dambeeya naqshad tayo sare leh oo musqusha ah, waa in la qariyo naf jilicsan. Laakiin isla dariiqii hore ee laamiga, ayaa lama huraan u ah inay dadku dareemaan caajis. Maanta waxaan la wadaageynaa qaar ka mid ah farsamooyinka jilitaanka casriga ah, ee gaarka ah si loo abuuro waxyaabo muhiim u ah qurxinta guryaha qurxinta!
Waxyaabaha laysku qurxiyo
Labadaba moodada iyo dabeecadda dambe ee dusha ubaxa, hubaal waxay noqon karaan aaladda indhaha ku qabata gudaha. Waa midabyo dhalaalaya, qaabab, halabuurku waa mid indhaha soo jiita. Hadday ahaan lahayd goob bandhig, ama aag yar oo qurxinta maxalliga ah, waad goosan kartaa saamaynta lama filaanka ah, si qaabka musqusha si lama filaan ah loo wanaajiyo.
Isku-darka laba jibbaaran ee caadiga ah
Tuulada oo lagu dhejinayo xeerarka dhexdooda, si loo helo dareen amar. Khadadka nadiifka ah, codadka fudud ee dhalaalaya, iyo lebenka laba jibbaaran laftiisa ayaa soo bandhigaya dareen xarrago leh, oo dadka siinaya khibrad muuqaal ah oo aan la qiyaasi karin.
Haddii aad rabto inaad jebiso dareenka hagaagsan ee nadiifinta, waxaad isticmaali kartaa isbeddellada xariiqda khafiifka ah, sida I-beam si kor loogu qaado quruxda loona muujiyo lakabyada isdaba-joogga ah.
Isku midab isku midab ah iyo marmarka dhulka
Qaabka isku midka ah ee dabaqyada iyo marmarka gidaarka ayaa u adeegi kara sidii aragti dheeri ah, taasoo ka dhigeysa meesha banaan mid muuqaal ballaaran, faaruq ah iyo dareen xoogan oo dhan.
Darbiyada midabbada kala duwan leh iyo marmarka dhulka
Noocyo kala duwan iyo qaabab kala duwan oo ah darbiyada iyo sagxadaha dhulka ayaa aad ugu habboon in la abuuro dareen sare oo kala sarreyn ah. Xilligan oo ah muujinta shakhsi ahaaneed, aan caadi ahayn, asal ahaan, si loo gaaro naqshad bannaan oo aan caadi ahayn.
Hore:: Musqusha Dadyowga Kale Maxay Markasta Ugu Fiicanyihiin? Next: Kan Dunida Ugu Horeeya! Fadhi Nabdoon Oo Faa'iido Leh Oo Ku Yaal Musqusha, Si Aad Ugu “Maydho” Xawaarahaaga